Top 3 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 3 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres
(Last Nohavaozina: 22/11/2021)
Ny UK. Ny renivohitra dia mitondra fahafinaretana betsaka ho an'ny mpandeha sy ny mponina. Avy any Big Ben sy London Eye ka hatrany Westminster Abbey sy Buckingham Palace – be dia be ny toerana hotsidihina any Londres. Eo koa ny maritrano mazava, fiainana alina mamirifiry, ary nahandro matsiro. Na izany aza, Ny zavatra adinoin'ny ankamaroan'ny olona matetika dia ny London koa dia tora-bato lavitra amin'ny dia maro fiaran-dalamby nankany toerana any U.K. ary Eoropa.
Na te handositra ny toetr'andro manjavozavo any London ianao ary hilentika masoandro na miroboka ao anatin'ny fihaonana amin'ny tantara, hahita toerana maro manodidina an'i London ianao. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy mila miady amin'ny filaharana fisavana fiarovana lava eny amin'ny seranam-piaramanidina ianao. fa tsy, azonao atao fotsiny ny misafidy ny toerana halehanao ary mitsambikina amin'ny lamasinina avy amin'ny iray amin'ireo fiantsonana maro ao London. Ireto ny 3 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres.
Ny ody majika amin'ny fiarandalamby
Na mitsidika an'i Londres mandritra ny andro vitsivitsy ianao na mijanona ao an-tanàna mandritra ny fotoana mahatadidy anao, maka a mitaingina fiaran-dalamby afaka manova ny fomba fijerinao momba ny tanàna. Mihoatra ny embodiment metropolis an-tanàn-dehibe, London dia voahodidin'ny maro tanàna mahafinaritra, tanàna kolejy, tora-pasika, ary ny tanàna manan-tantara.
Ireo toerana rehetra ireo dia mora azo amin'ny lamasinina avy any Londres, ary tsy hitondra anao mihoatra ny adiny roa vao tonga. Ny fiaran-dalamby avy any Londres dia iray amin'ireo traikefa amin'ny teny anglisy indrindra ho hitanao.
Fa ny ampahany tsara indrindra amin'ireo dia fiaran-dalamby avy any Londres dia tsy ny toerana. Ny dia naharitra adiny iray dia manome anao topimaso ny ambanivohitra Eoropeana mahazatra miparitaka amin'ny lapa rustic, loharanon-dranomamy, ary havoana mihodinkodina.
Noho izany, tsy misy resaka intsony, Andeha hojerentsika ny safidintsika ho an'ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby tsara indrindra avy any Londres.
1. Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres: Brighton
Raha mieritreritra ny haka lamasinina avy any Londres ianao, Brighton angamba no toerana voalohany ho tonga ao an-tsainao. Ahitana tora-pasika vatokely madio, kafe hip, trano fisakafoanana plush, ary lalana tery miolakolaka, Brighton dia manolotra fiatoana tsara amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe mikorontana.
Ary, ny tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra dia fonenan'ny Royal Pavilion mahavariana, lapa 200 taona izay nialan'ny Printsin'i Pays de Galles indray mandeha tamin'ny fahavaratra. Fantatra amin'ny anarana hoe "Renivohitra Gay an'ny UK", Brighton koa dia trano fonenan'ny trano fisotroana mahavariana mahavariana ary fetiben'ny fireharehan'ny pelaka isan-taona.
Taorian'ny nandrotsahana ny tara-masoandro mafana, Ny fandehanana amin'ny araben'i Brighton mahafinaritra dia hamela anao hahita lafiny vaovao amin'ny tanàna. Ny lalana tery dia misy fivarotana fahatsiarovana tranainy, fivarotana rakitsoratra vinyl, ary galleries mahasarika.
Aza adino ny mijanona amin'ny kaopy kafe amin'ny iray amin'ireo trano fisotroana kafe tsara tarehy manarona ireo arabe ireo. Na afaka mankafy pint mamelombelona ao amin'ny iray amin'ireo zaridaina labiera ianao. koa, jereo ny sasany amin'ireo santionany velona tsara indrindra tamin'ny maritrano tamin'ny taonjato faha-16.
Ny mahasarika hafa ao Brighton dia ahitana ny Rockery Preston Park, izay zaridaina vatolampy lehibe indrindra any U.K, ary koa ny Brighton Palace Pier. Tena mahafinaritra tokoa izany Solo mpandeha toy ny an'ny fianakaviana.
Na mitady fitsangatsanganana isan'andro ianao na miala sasatra fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro avy any Londres, Brighton dia safidy tsara. Aza adino ny mamaky bebe kokoa momba ny zavatra tsara indrindra atao any Brighton, ny UK., mandritra ny faran'ny herinandro eo am-panomanana ny dianao.
Tonga any Brighton amin'ny lamasinina
Ny zavatra tsara momba an'i Brighton dia ny hahatongavanao ny tanàna avy any Londres ao anatin'ny adiny iray monja. Ny lamasinina mankany Brighton dia miainga isaky ny mandeha 10 minitra avy amin'ny fiantsonana isan-karazany, anisan'izany ny gara London Victoria sy London St. Pancras-peo.
2. Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres: Stonehenge sy Salisbury
Miaraka amin'ny Moyen Âge lapa ary lapam-panjakana, Ny UK dia tsy manana fahasahiranana ho an'ny mpankafy tantara. Fa raha tianao ho velona ny traikefa voalohany amin'ny fijerena ireo pejin'ny boky tantara, tsy maintsy mitsidika an'i Stonehenge.
Ny rafitra vato prehistoric goavambe, nino fa mihoatra noho 5,000 taona, Mbola mampisafotofoto ny mpahay tantara sy ny arkeology. Tsy azon'ny mpitsidika atao ny manontany tena hoe ahoana no nahafahan'ny mpanao trano nitaritarika an'ireo vato lehibe ireo hankany amin'ny toerana misy azy ireo..
Situated latsaky ny 10 kilaometatra miala an'i Salisbury, Stonehenge dia fiarandalamby 90 minitra miala an'i U.K. renivohitra. Hahita fiara fitateram-bahoaka sy taxi be dia be ianao ao amin'ny gara Salisbury izay hitondra anao any amin'ny toerana taloha.
Raha mbola eo ianao, aza adino ny mikaroka toerana hafa atolotry ny faritra. Anisan'izany ny faribolan'ny hazo Woodhenge sy ny sisa tavela amin'ny Rindrin'i Durrington mistery..
koa, hevitra tsara ny mandany fotoana kely ao amin'ny tanàna manan-tantara ao Salisbury. Mankanesa any amin'ny Katedraly Salisbury tamin'ny taonjato faha-13 ary mandehana midina amin'ny Katedraly Close mba hijery ny Elizabethan sy Victorian an'ireo trano fahagagana. Aza manaram-po amin'ny fiantsenana eny amin'ny Market Square alohan'ny hividianana labiera iray litatra ao amin'ny cafe iray.
Tonga any Stonehenge amin'ny lamasinina
Mandeha lamasinina mankany Salisbury avy eo amin'ny gara London Waterloo. Rehefa tonga any amin'ny gara Salisbury ianao, Miaingà taxi na fiara fitateram-bahoaka mba hahatongavana any Stonehenge. Ataovy azo antoka fa mamandrika mialoha ny fitsidihanao an'i Stonehenge ianao.
3. Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres: Cotswolds
Fantatrao fa mendrika hotsidihina ny toerana iray rehefa voatendry ho "Faritra misy hatsaran-tarehy voajanahary miavaka". Miaraka amin'ny havoana maitso mavana, zaridaina voninkazo manicured, trano bongo-bato, ary trano idyllic, Cotswolds no sary mandrora ny ambanivohitra anglisy mahazatra mety ho hitanao tamin'ny sarimihetsika.
Cotswolds dia iray amin'ireo toerana tsy mila manao zavatra betsaka amin'ny fialan-tsasatra miala sasatra avy any Londres. Anisan'ny toerana mahasarika malaza ao amin'ny faritra ny Broadway Tower, Burton-on-the-Water, Bibury, ary Sudeley Castle.
Tonga any Cotswolds amin'ny lamasinina
Ny faritr'i Cotswolds dia voahodidin'ny tobin'ny gara, anisan'izany i Banbury, Bath, Cheltenham, ary Morten-in-Marsh. Ny fomba tsara indrindra hahatongavana any Cotswolds avy any Londres dia ny lamasinina avy any amin'ny gara London Paddington mankany Morten-in-Marsh.. Ny fiarandalamby 90 minitra dia manome valisoa anao mahatalanjona ny fomba fijeriny ny ambanivohitra anglisy.
Amin'ny manaraka ianao dia maniry fialan-tsasatra miala sasatra, aza mandany fotoana be loatra amin'ny drafitra. fa tsy, mandehana fiaran-dalamby avy any amin'ny gara any Londres ary mandosira mankany amin'ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra any UK.
Izahay ao Save A Train dia ho faly hanampy anao hanomana fitsangatsanganana amin'ireo Top ireo 3 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe “Top” ve ianao? 3 Toerana fitsangantsanganana tsara indrindra avy any Londres” eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
BestTripDestinations London Train Travel fiaran-dalamby nankany TrainTripLondon
Mpizaha tany an-tselika sy mpikaroka tia mizara ny traikefany amin'ny asa sorany. Mino ny fanehoana ny hevitro amin'ny fomba hentitra aho ary mijoro amin'ny ataoko - Afaka tsindrio eto raha Mifandraisa amin'i Rebecca
Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe, Travel Tips